Dowladda Soomaaliya oo faah-faahisay kulankii dhex maray Farmaajo iyo Uhuru - Caasimada Online
Home Warar Dowladda Soomaaliya oo faah-faahisay kulankii dhex maray Farmaajo iyo Uhuru
Dowladda Soomaaliya oo faah-faahisay kulankii dhex maray Farmaajo iyo Uhuru
New York (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku kulmay magaalada New York, oo ah goobta uu ka socdo shirka Golaha Guud ee QM.
Kulankan ayaa waxa fududeeyey madaxweynaha Masar Cabdifataax Asiisi, oo hadda haya xilka Guddoomiyaha Midowga Afrika.
Villa Somalia ayaa sheegtay in kulankaas “la isku raacay in xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.”
Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibedda Kenya, Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ku tiri “Kenya waxay soo dhoweeneysaa kulankan koowaad oo ah tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Kenya waxay mar walba rumeysneyd, ayna sii wadeysaa inay ku baaqdo in wada-xaajoodyadu ay yihiin habka ugu wanaagsan ee dhibaatooyinka Afrika loogu heli karo xal Afrikaan.”
Haddaba, wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa idaacadda VOA-da waxa uu faah-faahin ka siiyey kulankii labada madaxweyne iyo waxyaabaha uu madaxweyne Farmaajo kusoo qaadayo khudbadiisa QM.